Trano - Vaovaon'ny sekoly ankehitriny: vaovaon'ny sekoly ankehitriny
Fanolorana vatsim-pianarana Facebook ho an'ny mpianatra Nizeriana 2021/2022 Portal Update
Vatsim-pianarana Facebook ho an'ny mpianatra Nizeriana: Facebook dia iray amin'ireo sehatra media sosialy be mpitia indrindra izay ahitan'ny olona ireo fantany / mety ho tian'izy ireo ho fantatra. Na izany aza, ankoatry ny maha sehatra fifampiresahana azy dia sehatra iray hanaovana dokambarotra momba ny orinasa ihany koa izy. Ankoatr'izay, sehatra iray ihany koa izy io manome vatsim-pianarana hanondrahana vava ho an'ny mpianatra. Toa mahatalanjona izany, sa tsy izany? Eny an'ny […]
Vatsim-pianarana hianarana any ivelany ho an'ny mpianatra Nizeriana 2021 Lisitra fampiharana
Vatsim-pianarana hianarana any ivelany ho an'ny mpianatra Nizeriana: fantatrao ve fa misy tombontsoa mifandraika amin'ny maha Nizeriana anao? Ary ny sasany amin'ireo tombontsoa ireo dia miharihary amin'ny lafiny vatsim-pianarana hianarana any ivelany? Tokony ho fantatrao izany. Ary koa, ireo vatsim-pianarana ireo dia natao manokana hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpianatra Nizeriana. Na izany aza, na dia […]
Fampiharana mari-pahaizana momba ny vatsim-pianarana vatsim-pianarana collegesasiswas.org 2021 Vaovao farany
Fampiharana vatsim-pianarana kendrena: Ny Target Corporation dia manolotra vatsim-pianarana sy fanomezana tombontsoa ho an'ny mpianatra. Na izany aza, ny mpianatra dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana. Ankoatr'izay, ny vatsim-pianarana Target miaraka amin'ny fikambanana hafa hamorona valisoa fanampiny ara-bola. Araka izany, afaka miditra amin'ireo vatsim-pianarana ireo amin'ny Internet tsy misy vidiny ireo mpianatra. Na izany aza, raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity vatsim-pianarana ity sy ny fahafahany […]
Microsoft Disability Scholarship 2021/2022 Fanavaozana ny vavahady fampiharana
Vatsim-pianarana Microsoft Disability: ity vatsim-pianarana ity dia vatsim-pianarana natao hanampiana ireo sembana. Raha izany, raha manana endrika kilemaina ianao, dia tokony horaisinao ho zava-dehibe izany fampahalalana izany. Vakio manontolo ity lahatsoratra ity raha te hahalala bebe kokoa momba ity vatsim-pianarana Microsoft sembana ity. Matokia ahy, ho faly ianao fa nanao izany. Tanjon'ny vatsim-pianarana Microsoft Disability […]
Vatsim-pianarana 2021 be vatsim-pianarana ho an'ny Mpianatra Iraisam-pirenena Form Portal
Vatsim-pianarana be vola: Amin'ny maha-mpianatra iraisam-pirenena anao dia be dia be ny vatsim-pianarana azonao. Na izany aza, ny hany ilainao dia ny mahafeno ny fepetra takiana sy mampihatra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hahazo fampahalalana momba ny sasany amin'ireto lahatsoratra ireto ianao. Ho vakianao koa ny fomba sy ny toerana hidirana amin'izy ireo. Araka izany, []
Vatsim-pianarana MPH an-tserasera ho an'ny firenena an-dalam-pandrosoana 2021 Form Portal
Vatsim-pianarana MPH an-tserasera ho an'ny firenena an-dàlam-pandrosoana: te-hahazo mari-pahaizana britanika amin'ny siansa amin'ny fahasalamam-bahoaka avy amin'ny University of Suffolk amin'ny alàlan'ny UNICAF ianao? Raha eny dia ho anao ity vatsim-pianarana ity. Ary koa, ity vatsim-pianarana ity dia mikendry ny hanome fanampiana ara-bola an'izay nofinofisinao. Na izany aza, zava-dehibe ny hahitanao ny sain […]
Fampandrenesana momba ny vatsim-pianarana amin'ny University Harvard 2021/2022
Vatsim-pianarana University Harvard 2021: Mpianatra manantena hianatra ao Harvard ve ianao? Te hanana vatsim-pianarana hianarana any Harvard ve ianao? Sa, Harvard no sekoly nofinofisinao nefa tsy vitanao izany? Manana fampahalalana mety hahaliana anao aho. Misokatra ny vatsim-pianarana University Harvard ho an'ny 2021. Manome anao […] ity lahatsoratra ity
Vatsim-pianarana ICCR ho an'ny mpianatra any Bangladesh 2021/2022 Fanavaozana ny vavahady
Vatsim-pianarana ICCR ho an'ny mpianatra any Bangladesh: Ity misy zavatra mahaliana ho an'ny mpianatra ao Bangladesh. Misy vatsim-pianarana ho anao. Ity dia natolotry ny Indian Council for Cultural Relations (ICCR). Vakio tsara ho an'ny antsipiriany feno. Mpianatra ao Bangladesh dia afaka mangataka amin'ny vatsim-pianarana ICCR 2021. Ity lahatsoratra ity dia manome anao ny fampahalalana ilaina ilainao ho fantatra. […]
Apple WWDC vatsim-pianarana: Ho fankasitrahana ny mpanjifany dia manolotra vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra i Apple. Ary koa, ity vatsim-pianarana ity dia hanampiana ireo mpianatra manana fanamby ara-bola hampandroso ny fianarany. Ankoatr'izay, lasibatra ihany koa amin'ny fampitomboana ny fahaiza-manao sy ny fampandrosoana ny olombelona izany. Raha izany dia ilaina ny manandrana azy. Tsy manana na inona na inona ianao […]
Vatsim-pianarana Commonwealth ho an'ny mpianatra Nizeriana 2021 Portal fampiharana
Vatsim-pianarana Commonwealth ho an'ny mpianatra Nizeriana: amin'ny maha-mpianatry ny firenena Commonwealth anao dia misy vatsim-pianarana azonao tombony. Noho izany, amin'ny maha-mpianatra Nizeriana anao (firenena Commonwealth), dia afaka mandray soa avy amin'ny vatsim-pianarana koa ianao. Na dia izany aza, misy ny takiana, ity lahatsoratra ity dia manome anao fampahalalana tena lehibe momba ny fomba fampiharana amin'ny sasany amin'izy ireo. […]
Haryana vatsim-pianarana 2021/2022 Application Portal haryana.gov.in
Amin'ny maha mpianatra avy amin'ny fanjakana Haryana ny vatsim-pianarana Haryana 2021 eto ho anao. Fotoana fanabeazana maimaimpoana sy fanampiana ara-bola io. Ny vatsim-pianarana Haryana 2021 dia fotoana mety ho anao. Aza adino ity fampahalalana lehibe ity. Ny fanjakana Haryana dia nanome vatsim-pianarana betsaka. Mandrakotra ny fotoam-pianarana 2021/2022 izy ireo. Ao amin'ity lahatsoratra ity […]
Te hianatra any ivelany aho amin'ny vatsim-pianarana maimaim-poana: ny fianarana any ivelany dia nofinofin'ny mpianatra maro. Na izany aza, ny vidin'ny saram-pianarana dia matetika no mihevitra an'io nofy io. Ahoana anefa raha milaza aminao fa misy fomba? Ary, ahoana raha milaza aminao fa mbola misy fanantenana ny hianatra maimaimpoana any ivelany, dia hino ve ianao? Avelao aho […]
17 Fanolorana vatsim-pianarana injeniera feno famatsiam-bola 2021/2022 vaovao farany
17 vatsim-pianarana injeniera feno vola be indrindra: fanabeazana sy fampahalalana hoy izy ireo fa fahefana. Soa ihany fa samy hiady hevitra amin'ity lahatsoratra ity isika. Ao amin'ity lahatsoratra ity, misy sombim-baovao lehibe momba ny vatsim-pianarana injeniera feno vola. Raha izany, raha mitady vatsim-pianarana voatondro ho an'ny mpianatra injeniera ianao dia vakio azafady. 17 tsara indrindra […]
Fianarana any Alemana vatsim-bola feno vatsim-pianarana: Any Allemana dia natao mora ny fanabeazana. Misy vatsim-pianarana ahafahana manao izany. Ary koa, ny sasany amin'ireo vatsim-pianarana ireo dia miaraka amina fonosana mahavariana. Na izany aza, raha te hahalala bebe kokoa momba ireo vatsim-pianarana ireo ianao dia tandremo ny fampahalalana ato amin'ity lahatsoratra ity. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao ny toerana / ny fomba fampiharana […]
Vatsim-pianarana mifototra amin'ny SAT Scores 2021/2022 Application Portal Update
Vatsim-pianarana mifototra amin'ny Score SAT: Amin'ny maha-mpianatra mitady vatsim-pianarana dia mihainoa azafady. Misy vatsim-pianarana azonao alaina amin'ny isa SAT. Raha teny milamina, ireo vatsim-pianarana ireo dia mitaky anananao isa SAT manokana. Noho izany, ilaina ny mitazona io isa SAT avo io sy tsara indrindra. Raha te handre bebe kokoa ianao, […]
KARAZANA & FANAMPIANA
Fidinan'ny Kandidà voafidy fenix International 2021/2022 PDF List
Fidina Kandidà voafidy fohy Fenix ​​International 2021: Nivoaka ny anaran'ireo mpirotsaka voafidy ao amin'ny Fenix. Nangataka fangatahana Fenix ​​International 2021 tamin'ny pejy ofisialy www.fenixintl.com ve ianao? Avy eo mety manontany tena ianao hoe ahoana no ahafahanao manamarina ny mpilatsaka hofidina Fenix ​​International Shortlisted 2021. Mba tsy hitranga fa hita ao amin'ny […] ireo rehetra ireo.
Filed in Job by Editorial an'ny TMLT amin'ny 18 Jona 2021
Ampidiro izao Ho an'ny UNDP Job any Abuja ho an'ny Program Assistant 2021
Ampiharo izao Ho an'ny asa UNDP any Abuja 2021: Mitady asa any Nizeria 2021 ve ianao? Te hiasa ao amin'ny UNDP ve ianao? Ary koa, tsy hampaninona anao raha ampianarinay ianao amin'ny fomba ahafahanao mangataka ny fandraisana mpiasa UNDP any Nizeria sy ny sisa. Raha eny dia tohizo ny famakiana. Programme fampandrosoana ny Firenena Mikambana […]
Filed in Job by Staff editorial amin'ny 18 Jona 2021	• 0 Comments
Fahafahana asa aman-draharaha ao amin'ny PricewaterhouseCoopers (PWC) 2021 Vaovao farany
Fahafahana asa aman-draharaha ao amin'ny PricewaterhouseCoopers (PWC): PricewaterhouseCooper dia manangona toerana asa maromaro. Ny mpifaninana mety dia tsy maintsy manana mari-pahaizana bakalorea amin'ny asa na sehatra mifandraika amin'izany. Ny PwC dia manampy ny fandaminana sy ny olona hamorona ny soatoavina tadiavin'izy ireo. Tambajotran'ny orinasa any amin'ny firenena 158 izahay miaraka amin'ny olona maherin'ny 180,000 izay tapa-kevitra ny hanome kalitao […]
Fandraisana an-tanana PricewaterhouseCooper (PwC) ho an'ireo mpanampy amin'ny fitantanana diplaoma 2021: PricewaterhouseCooper dia manangona ho an'ny mpanampy amin'ny fitantanan-draharaha. Ny mpifaninana mety dia tsy maintsy manana mari-pahaizana bakalorea amin'ny kaonty, fitantanam-bola, toekarena, statistika, lalàna na sehatra mifandraika amin'izany. Ny PwC dia manampy ny fandaminana sy ny olona hamorona ny soatoavina tadiavin'izy ireo. Tambajotran'ny orinasa any amin'ny firenena 158 izahay miaraka amin'ny olona maherin'ny 180,000 […]
Fandraisana mpiasa PricewaterhouseCooper ho an'ny tale mpitantana lefitra: PricewaterhouseCooper dia manangona ho talen'ny fitantanana lefitra. Ny mpirotsaka hofidina dia tokony hanana traikefa farafahakeliny 5 taona ao amin'ny orinasa Banky Investment Investment. PricewaterhouseCooper (PwC) - Ny mpanjifanay amin'ny sehatry ny Banking Investment dia mikasa ny hameno ny andraikitra etsy ambany: Lohatenin'ny asa: Tale mpitantana lefitra isa: 130-PEO00859 […]
Filed in Job by TMLTStaff amin'ny 18 Jona 2021	• 0 Comments
Ampidiro izao ho an'ny toekarena zandriny (Serivisy anatiny) 2021: ny PricewaterhouseCooper dia mandray mpiasa ho an'ireo mpahay toekarena tanora. Ny mpirotsaka hofidina dia tokony hanana farafahakeliny mari-pahaizana bakalorea amin'ny anglisy, matematika, siansa sosialy na fifehezana toekarena. Ny orinasa PwC dia manampy ny fikambanana sy ny olona hamorona ny soatoavina tadiaviny. Tambajotran'ny orinasa izahay tamin'ny 158 […]
Ampiharo izao ho an'ny fandraisana mpiasa mitohy ao amin'ny PricewaterhouseCooper (PwC) 2021: PricewaterhouseCooper dia misambotra ho an'ny mpanampy amin'ny fitantanan-draharaha. Ny mpifaninana mety dia tsy maintsy manana mari-pahaizana bakalorea amin'ny asa na sehatra mifandraika amin'izany. PricewaterhouseCooper (PwC) - Ny mpanjifanay, orinasam-panamarinana ISO 9001: 2008 izay manome serivisy fanaraha-maso, fiofanana ary fidirana amin'ny tadin'ny solika sy gazy, ranomasina ary indostrian'ny fanamboarana. […]
Fanavaozana ny fanabeazana
MBA amin'ny teknolojia fampahalalana 2021 Details, Syllabus ary kariera
Te hanana MBA amin'ny haitao fampahalalana ve ianao? Ny teknolojia fampahalalana dia teo am-panovana ny dikan'ny hoe miasa, miasa tsara, mamokatra ary manome serivisy sarobidy. Mampianatra ny mpianatra hanao lohahevitra sy hitantana ekipa rindrambaiko izy io. Vakio hatrany raha mila fanazavana fanampiny. MBA […]
Satire Essay ohatra 2021 S Torolàlana ho an'ny essayer Satire tonga lafatra
Tsy ny sanganasa rehetra dia natao ho matotra sy mandrara. Indraindray dia mety hahafinaritra ny famakiana lahatsoratra. Ny essayes satire dia ohatra iray tsara indrindra amin'ny lahatsoratra iray mampiala voly. Amin'ity lahatsoratra ity dia hitarika anao amin'ny fanoratana lahatsoratra satire tonga lafatra izahay; ary koa manome anao satire tsara indrindra […]
Essay Solution Solution, jereo ny torolàlana sy ohatra azo tsapain-tanana
Ny sanganasa famahana olana dia endrika fandresen-dahatra malaza. Amin'ireto sanganasa ireto dia tsy maintsy mamaritra olana iray ianao, mandresy lahatra ny mpamaky mba hikarakara ilay olana, hanolotra vahaolana ary ho vonona hamono ny fanoherana rehetra. Ity sy ny maro hafa toa ny torolàlana tsikelikely, hataoko mandritra ity lahatsoratra ity aminao. Avelao […]
Ity ambany ity ny lisitry ny asa be karama indrindra ho an'ireo nahazo diplaoma tany Amerika. Araka ny tatitra vao haingana nataon'ny Glassdoor.com, ny mpitsabo sy ny faritra misy ny mpisolovava dia mbola matihanina amin'ny firenena ambony. Raha jerena izany dia toa mahazo tombony ara-bola kokoa ny asa amin'ny fitsaboana sy ny lalàna. Mitadiava antsipiriany etsy ambany. Mba hanangonana ny lisitry ny fandoavambola tsara indrindra […]
Filed in fanabeazana by Staff editorial amin'ny 18 Jona 2021	• 1 Comment
Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita ohatra momba ny lohahevitra momba ny fanombanana ianao. Ity lahatsoratra ity dia natao hanehoana ny kalitaon'ny zavatra iray manokana. Mety ho zavatra, serivisy, vokatra ary toerana io. Na izany aza, tsy ampy ny maneho hevitra fotsiny. Antenaina ny hanao fanadihadiana lalina momba ilay lohahevitra ny mpanoratra. Tokony […]
Ny tahan'ny fanekena ny oniversite Richmond sy ny fepetra takiana amin'ny 2021
Ny tahan'ny fanekena ny oniversite Richmond dia sombim-baovao natao ho an'ny rantsan-tananao raha toa ianao ka te hisoratra anarana amin'ny programa Richmond University. Vakio àry ny atiny amin'ity pejy ity ara-pinoana mba hanananao fiadiana amin'ny fampahalalana ampy. Izay tokony ho fantatrao momba ny oniversite Richmond University of Richmond dia afaka mandeha fotsy […]
VAOVAO SEKOLY amin'izao fotoana izao
Portal fanarenana Unilorin www.remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php Vaovao farany
Portal Fanarenana Unilorin: Ity dia hampahafantarana ny mpianatra antitra sy ho avy rehetra fa efa miatrika ny vavahady fanarenana ny Oniversiten'i Ilorin. Ity pejy ity dia hanome anao hevitra momba izay antenaina ao amin'ny vavahady. Ary koa, hitari-dalana anao amin'ny fomba hidirana amin'ny vavahady izany ary havaozina rehefa ny lisitry ny fidirana […]
Portalan'ny mpianatra AAUA www.aaua.edu.ng/b/student/ Fanavaozana ny fampiharana farany
Portalan'ny mpianatra AAUA: Ny fahefan'ny Oniversite Adekunle Ajasin dia namela ny vavahadin-tsoratry ny mpianatra. Ary ity vavahady ity dia hanamora ny hetsika akademika ho an'ny mpianatra. AAUA dia fanjakana anjerimanontolo manana sy miasa ao amin'ny oniversite nizeriana. Na izany aza, manohy mamaky ity lahatsoratra ity fotsiny raha te hahalala bebe kokoa. Fa voalohany, inona no fantatrao momba ny Oniversite Adekunle Ajasin (AAUA)? […]
OAU Student Portal Login: Ny fahefan'ny OAU dia nahafahan'ny vavahadin'ny mpianatra. Ary ity vavahadin-tserasera ity dia manome fampahalalana ho an'ny mpianatra ho avy rehetra momba ny fizotran'ny fidiran'ny andrimpanjakana. Ary koa, amin'ity vavahady ity, ny mpianatra vaovao sy ny mpianatra miverina dia homena saika ny zavatra rehetra ilain'izy ireo hanamora ny fianarany sy ho tsara kokoa amin'ny andrimpanjakana. Oniversite Obafemi Awolowo (OAU) Obafemi […]
Portal BIU: Ny fahefan'ny Oniversite Benson Idahosa no nahafahan'ny vavahadin'ny mpianatra. Araka izany, amin'ny maha-mpianatra na ho avy mety ho mpianatra ny sekoly dia tokony hahaliana anao ity fampahalalana ity. Ary amin'ity lahatsoratra ity dia hahazo fampahalalana momba ny fidirana amin'ny vavahady BIU ianao. Fa aloha, alohan'ny hidiranao ao, inona no fantatrao momba […]
FUNAAB Student Portal www.unaab.edu.ng/ Hizaha ny vavahady fampiharana farany
Portal ho an'ny mpianatra FUNAAB: Raha mitady ny rohy ofisialy hiditra amin'ny vavahadin'ny University of Agriculture Abeokuta ianao dia eo amin'ny pejy mahitsy ianao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao ny vavahadin'ny mpianatra FUNAAB. Ao amin'ny vavahadin-tserasera ianao dia afaka manao hetsika toy ny: manamarina toy ny valiny, mandoa vola amin'ny saram-pianarana, […]
OFFA Poly Portal www.portal.fpo.edu.ng/admission.aspx Hamarino ny fanavaozana farany
Portal Poly OFFA: Amin'ny maha mpianatry ny polyteknika OFFA anao, ity vaovao ity dia hahaliana anao. Misy endrika vavahady iray manokana ho an'ny mpianatra OFFA Poly. Ato amin'ity vavahady ity, be dia be ny hetsika akademika azo tanterahina amin'ny mora. Na izany aza, mila mamaky ity lahatsoratra ity ianao raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba […]
100+ Teny mampihomehy izay mety tsy fantatrao fa hampihomehy anao
Mahafinaritra ny milaza ny teny mampihomehy. Rehefa mieritreritra momba azy ianao, ny teny sasany amin'ny teny anglisy dia mety ho mahaliana ihany. Ary rehefa miteny hoe "mahaliana" isika dia tena hafahafa sy mahatsikaiky tokoa no tiana holazaina. Fa hey, izany no mahatonga azy ireo hahafinaritra, sa tsy izany? Teny mahatsikaiky Ity dia fitambarana teny mampihomehy sy ny dikany. Arotsaho ao anaty […]
Ahoana no fanalana ny voalavo ao an-trano amin'ny fomba mahomby sy ampy
Mahaliana fa ny zavatra madinidinika sy kely indrindra eto amin'ity fiainana ity dia mety hiteraka olana sy olana lehibe indrindra amintsika. Toa tsy dia tsara loatra ny mieritreritra fa ny zavamiaina bitika vitsivitsy toy ny voalavo dia mety hisarika olona betsaka hisarika ny sain'ny olona ary mety hiteraka fikorontanana be mihitsy aza. Olona tsy tambo isaina no nanontany ny fomba fanariana voalavo ao amin'ny […]
Mitady anarana amin'izao fotoana izao ho an'ny zazalahy lahy? Noa mety ho safidy tsara ho anao. Andao hojerentsika ny The Name Name, Origin, and Popularity, ary raha anarana mety ho an'ny zanakao lahy izany. Ny anarana hoe Noa dia anarana lahy avy amin'ny fiaviana hebreo izay midika hoe fitsaharana. Voalohany indrindra […]
BLW Staff Portal www.blwstaffportal.org/auth/login/?refr=Lw== Vaovao farany
BLW Staff Portal: Miezaka miditra ao amin'ny BLW Staff Portal ve ianao? Ny fomba tsotra indrindra hanaovana izany dia ny fampiasana ireo rohy ofisialy izay homena etsy ambany. Izahay dia mitazona ny fanavaozana ny rohy rehetra amin'ny fotoana rehetra. Ary koa, raha te-hiditra amin'ny BLW Staff Portal ianao, dia misy fomba tena mora […]
18 Zava-misy mahafinaritra momba ahy tiako ho fantatra ny rehetra
Zava-misy mahafinaritra momba ahy: Raha hanao lisitry ny “zava-misy mahafinaritra momba ahy” ianao, inona no hataonao ao? Fantatro ny zavatra tsapany rehefa angatahina ianao hilaza zava-misy mahafinaritra momba anao. Indraindray ianao dia very hevitra amin'ny zavatra mety holazainao mba hamoronana fehezanteny iray ho an'ny tenanao. Ao amin'ny […]
Filed in Articles by Staff editorial amin'ny 18 Jona 2021
Ahoana ny fomba hananganana orinasam-pitaterana mahomby izay ahazoana tombony tsara
Orinasa fitaterana: te-hahazo vola hitaterana olona sy entana amin'ny toerana iray ianao? Raha eny, ity lahatsoratra ity dia hitarika anao amin'ny fomba hanombohana orinasam-pitaterana. Ny fanombohana orinasam-pitaterana dia mitaky anao manapa-kevitra amin'ny karazana orinasa kasainao hamoronana, izay misy ny fanofana bisikileta, ny serivisy amin'ny taxi, […]
App grading ho an'ny mpampianatra: ny fiakaran'ny haitao finday dia tena niteraka resa-pianarana sy fampianarana taloha. Ny teknolojia finday dia nanimba ny fetra, nanokatra ny fahafaha-mianatra vaovao, ary, ny tena zava-dehibe, dia nanitatra ny fahafaha-mianatra mba hampiditra ny habaka virtoaly. Miaraka amin'izany ny fahaleovan-tena ary koa ny fihenan'ny resaka dynamique tempo-jeografika manodidina ny fianarana. Mitovy amin'ny […]
Fiara-tafika Nizeriana - Jereo eto ny lisitry ny tobin'ny tafika nizeriana
Ny laharan'ny miaramila any Nizeria dia marika miaramila ampiasain'ny Tafika Nizeriana. Ity ambany ity ny lisitr'ireo laharana miaramila Nizeriana rehetra araka ny filaharany avy. Ny laharan'ny tafika dia misy na mizara roa, ny mpiandraikitra voatendry sy tsy komisiona. Ny sampana serivisy tsirairay avy amin'ny tafika nizeriana dia manana marika mifandraika amin'izany. […]
Filed in Articles by Staff editorial amin'ny 18 Jona 2021	• 0 Comments